Fotoana hanovana paikady marketing amin'ny mailaka rehefa ... | Martech Zone
Fotoana hanovana paikady marketing amin'ny mailaka rehefa…
Alakamisy, May 8, 2008 Zoma, Oktobra 6, 2017 Douglas Karr
Toy izao ny mailakao:
Angamba andalana foto-kevitra maharesy lahatra sy manokana fa tsy hoe "ChangeThis: Issue 46"
Angamba tapaka ny tsipika sasany ka tsy mila fonosako aho rehefa mamaky (tsy novakiko, tsy afaka natao izany).
Angamba mailaka multi-part MIME handefasana sms ho an'ireo maniry bika tsotra, fa HTML ho antsika izay mankafy mailaka noforonina tsara.
Fampidirana manintona angamba?
Angamba toerana fotsy misy eo anelanelan'ny lohahevitra mba hahamora ny fizahana azy?
Angamba lohateny hanasongadinana ireo lohahevitra samihafa ary hanavahana azy amin'ny famaritana?
Angamba lisitra misy bala miaraka amin'ireo rohy sy fampahalalana mifandraika amin'izy ireo?
Angamba lisitry ny rohy mahazatra miverina amin'ny tranokala?
Hafa angamba Mpanome tolotra mailaka raha sarotra ampiasaina ny anao?
Ny ampahany mahatsiravina eto dia izany ChangeThis'byline dia:
ChangeThis dia mamorona karazana haino aman-jery vaovao. Ny endrika haino aman-jery izay mampiasa fitaovana efa misy (toy ny PDF, bilaogy ary tranonkala) hanoherana ny fomba famoronana sy fanaparitahana ny hevitra.
Fikambanana lehibe izy io miaraka amina fitaovana be dia be hanentanana ny fanovana ny mpitondra sy ny mpandraharaha. Tena ratsy loatra ny nifidianan'izy ireo tsy hiraharaha ny fomba fifandraisana tokana izay mitazona ahy hiverina amin'ny tranonkalany.
Nisoratra anarana aho.
5 / 8 / 2008: Na dia nisoratra anarana aza aho dia nahazo ity mailaka ity androany. Tsy azonao antoka izay mety ho nitranga fa fanatsarana lehibe izany:
Tags: lisitry ny balachangethisrohy mahazatramailakafandefasana mailakaLohatenyfampidiranatapaka ny tsipikarohyMIMEmulti-part mimeNewsletterandalana foto-kevitrahabaka fotsy
Ny famaranana I-Prize an'ny Cisco!
Sintomy ity programa namboarinay ity hanamboarana ny programa?
May 8, 2008 amin'ny 9: 17 AM
Angamba nokapohinao teo amin'ny lohanao izany. Lahatsoratra tsara sy torohevitra tsara.
May 8, 2008 amin'ny 10: 30 AM
Misaotra an'i Lewis!
May 9, 2008 ao amin'ny 10: 17 PM
Ny tiako indrindra dia ny rehefa miaro ny "Issue46" amin'ny mpanjifa ny mpanjifa ary samy manana ny laharan'ny famoahana ao amin'ilay andalana. Reko fa nisy nilaza hoe: “Mba hahafahan'ireo mpanjifanay mandamina mailaka voatahiry ao amin'ny mpanjifany mailaka.”
Mananihany ahy ve ianao? Manome vola be ahy ianao hilazana aminao ny fomba ahazoana misimisy kokoa ny tahan'ny fisokafana sy ny tsindrio raha tsy te-hiova hevitra ianao? Mirary soa ireo metrika ireo… ..